60 Lohahevitra Tumblr Maimaimpoana Tena Madio Sy Madio | Famoronana an-tserasera
Tema ho an'ny Tumblr
Fran Marin | | lohahevitra
Raha mitady ianao Lohahevitra Tumblr, eto no ahitanao lohahevitra mahavariana amin'ny lohahevitra rehetra ahafahanao manamboatra ny bilaoginao tanteraka amin'ity sehatra ity.
Anisan'ireo vahaolana azo atolotra indrindra hidirana amin'ny microblogging angamba ny Tumblr no ekena sy malaza indrindra. Toy ny WordPress na Blogger dia manome fitaovana marobe hamoronana sy hampivelarana ny atiny an-tserasera isika, na izany aza, raha misy zavatra manavaka an'io sehatra io amin'ny ambiny, dia ny fahatsarany. Ao amin'ny Tumblr dia manjaka ny atiny an-tsoratra ny sary noho izany dia mahazo andraikitra lehibe izy ireo rehefa mamaritra ny tranokalantsika ary mahatonga azy io ho safidy tena mahomby amin'ny famoronana portfolio, ohatra. Ny toetra amam-panahy sy ny fotodrafitrasa atolotray antsika hanamboarana sy hananganana ny tranokalanay dia mahatonga azy io ho iray amin'ireo safidy be mpampiasa indrindra amin'ny mpanao mari-trano sy ny mpanao sary.
Amin'ny ambaratonga famolavolana dia manolotra antsika a alternatives maro ary modely izay hampiakatra ny sokajy bilaoginay. Raha ny marina dia misy ireto karazana maodely ireto ao amin'ny tranonkala misy safidy isan-karazany azo atao isan-karazany. Anisan'ireo safidy natolotry ny Tumblr ny tenany, dia mahita vahaolana mizarazara amin'ireto sokajy manaraka ireto: tsanganana iray, tsanganana roa, tsanganana, lohahevitra novolavolaina indrindra ho an'ireo tranonkala izay hampiantrano atiny maro karazana, minimalista, isan-karazany ary vahaolana avo lenta. Androany dia te hizara aminao izahay mihoatra ny fifantina mahaliana lohahevitra Tumblr maimaim-poana enimpolo izay tena kanto ary manome famaranana kanto sy matihanina.
1 Tumblr lohahevitra amin'ny tsanganana
2 Lohahevitra Tumblr misy tsanganana roa
3 Grid Tumblr Themes
4 Mety amin'ny fampiantranoana atiny lahatsoratra
5 Lohahevitra minimalista tumblr
6 Lohahevitra Tumblr fanapahan-kevitra avo
7 Lohahevitra Tumblr 30 maimaim-poana
Tumblr lohahevitra amin'ny tsanganana
Lohatenin-doko fisaka sy lohateny malaza. Mety amin'ny fampiasana vahaolana loko mifanohitra avo. Sidebar ankavanana, footer fisaka izay mampifangaro ireo sary famantarana sosialin'ny mpanoratra.
Ohatra iray amin'ny famolavolana fitaovana miaraka amina interface iray tena dinamika sy tsotra. Ireo singa mitsingevana ary famaranana minimalist izay manome rivotra mamelombelona. Izy io dia mirakitra menio lafiny iray somary nihena izay ahafahan'ny mpamakinao mivezivezy amin'ny tranokalanao amin'ny fomba haingana sy mailamailaka.
Menio ambony izay takona ho azy ary manolotra antsika ny fahafaha mamoaka azy rehefa tsindrio ny bokotra. Lohateny raikitra rehefa mikorisa ary amin'ny ankapobeny dia vahaolana faran'izay minimalista izay manome lanja lehibe ny atiny lahatsoratra.
Fifanarahana mahazatra. Ny firafiny dia manaraka ny làlan'ny sekoly taloha. Tsy misy karazana singa mitsingevana na lohan-doha raikitra rehefa mikorisa. Mety aminao raha mitady vahaolana mahazatra sy mazava ary tsotra ianao.
Tena mitovy amin'ny rafitra omen'i Oslo antsika. Fifanarahana mahazatra sy tena intuitive, na dia misy menio ambony izay tsy raikitra koa. Mety raha ny hamorona bilaogy mahazatra sy hampiely vaovao tsotra sy mazava no tanjontsika.
Natao ho an'ny artista sy matihanina amin'ny tontolo famoronana. Famaranana minimalist tanteraka miaraka amin'ny menio ankavia mitsingevana, tetezamita mora foana ary singa fisaka.
Lohahevitra Tumblr misy tsanganana roa
Tsotra ary koa kanto. Izy io dia ahafahanao manamboatra singa misy eo amin'ny loko sy mametraka photosets amin'ny fomba tsanganana roa. Mety amin'ny fampitoviana lahatsoratra amin'ny haavon'ny fampahalalana mitovy amin'ny endrika sary.
Izy io dia vahaolana tena mahavariana ary saika miaraka amin'ny rivotra pop-art izay ao anaty firafiny ny menio sisin-drano mitsingevana ary vahaolana manaitra manaitra ho an'ny bokotra sy singa lahatsoratra. Mety ho an'ireo rehetra natokana ho an'ny tontolon'ny lamaody na liana amin'izany.
Mampifangaro ny fampiharana sy ny fombafomba amin'ny vahaolana mahaliana izy io. Amin'ny endriny dia misy fisian-javatra mitovy mihitsy eo amin'ireo lahatsoratra sy sary. Manolotra faritra ambonimbony izay miasa ho galeriany ho an'ny atiny sy lahatsoratra asongadiny ary etsy ambany ny menio tsotra misy lohateny ahitana ny lotogype an'ny tranokalanay.
Modely tsotra sy mahazatra dia mety ho an'ny toerana misy rivotra tanora sy tsy ara-potoana. Arotsaho eo ambonin'ireo sary sy bokotra amin'ny fonony amin'ny fomba fisaka. Mahaliana.
Manolotra fomba fanaovan-gazety somary mahonon-tena izy io. Mahafinaritra ny firafiny satria misy faritra midadasika be izay mampiala voly ny famakiana. Na ny latabatra ambony na ny sisiny dia mijanona ho miorina hatrany na eo aza ny fanodinan'ny mpampiasa azy.
Tsy isalasalana fa ny iray amin'ireo maodely tiako indrindra. Manolotra menio lafiny iray izay azo aseho amin'ny alàlan'ny bokotra iray. Ny atiny manjaka amin'ity tranga ity dia sary mavesa-danja ary ny datin'ny lahatsoratra tsirairay dia miseho amin'ny endrika marika (saika manahaka ny hatsaran'ny sary analog). Atoro ho an'ireo mpamorona atiny na inona na inona karazany.
Modely manintona somary manintona fa miaraka amin'ny nuances tsy ara-potoana izay manome fanatrehana lehibe kokoa ny atiny sary. Manohiza menio ambony sy sidebarara voafetra. Misongadina amin'ny fisehoan'ny fahamaotinana sy ny fampidirana ireo singa mavitrika toy ny lohateny.
Tohizo miaraka amin'ny menio sisiny voafetra sy rafitra izay manome filaminana sy fahaiza-mamaky teny betsaka nefa tsy mampiasa singa mavesatra loatra. Miorina amin'ny famoronana atiny tsy ara-potoana.
Sehatra natao ho an'ny fampahalalana sary ary misy singa mavitrika tokoa. Manasongadina fiovana hoover amin'ny singa rehetra ary mivadika ho loko marevaka sy endrika madio sy matihanina.
Grid izay misy singa maro an-tsoratra sy sary. Sakafo tsotra ambony sy interface tsara sy feno.
Modely natao ho an'ny portfolio ho an'ireo matihanina amin'ny sary. Namboarina ny menio sisiny vonona hampiantrano sary marobe izay miteny ho azy ireo.
Sary niavaka, tontolo iainana natao hizarana ny sarinao manomboka amin'ny minitra zero amin'ny pejy voalohany sahala amin'ny galeriana ary misy diky kamo amin'ny horonan-taratasy.
Mety amin'ny fampiantranoana atiny lahatsoratra
Ny ankamaroan'izy ireo dia manana firafitra misimisy kokoa izay mamela toerana ho an'ny atiny sary amin'ny endrika sary sy ho an'ny atiny amin'ny endrika lahatsoratra na lahatsoratra. Ny tsirairay amin'izy ireo dia mikendry ny fanaparitahana karazana atiny sasany, hahitana vahaolana kanto, tsy ara-potoana na matihanina. Miavaka amin'izy ireo izy ireo:
Art hoy izy
Lohahevitra minimalista tumblr
Kely kokoa noho izany, noho izany Tumblr dia tsy nanadino ireo karazana minimalism mba hamolavolana modely kanto natokana ho an'ny fampandrosoana sy fanaparitahana atiny. Amin'ny ankapobeny, ireo vahaolana ireo dia toa miseho matanjaka kokoa, kanto ary matihanina, mahazatra an'ireo mpamorona matotra kokoa.
Lohahevitra Tumblr fanapahan-kevitra avo
Ato amin'ity sokajy ity dia afaka mahita vahaolana amin'ny takelaka isika, tsanganana iray na roa na minimalist izay natao ho an'ny mpamorona atiny somary mitaky fangatahana kokoa. Ny kalitaon'ireo tolo-kevitra ireo dia somary avo kokoa, ireto misy ohatra tena manintona:
Lohahevitra Tumblr 30 maimaim-poana
Osprey: Tsotra be. Sidebar ankavia misy logo, famaritana ary menio. Eo ankavanana, ny sary rehetra.
-dalana,: Lohatenin'ny toerana sy famaritana mifototra eo an-tampony. Eo ambany, ny sary. Amin'ny maha-footer azy, ny menio.
Liberation: Ankoatry ny lohateny sy ny famaritana, dia manana ny menio afovoany eo afovoany koa ianao.
Okatheme: sidebar ankavia misy lohateny, famaritana, menio ary sary masina. Amin'ny lafiny ankavanana, ny asanao.
Milamina (mamaly). Miaraka amin'ny motera fikarohana sy sary famantarana ny tambajotra sosialy tafiditra ao amin'ny tapany ambony. Manaraka, lohateny, famaritana ary menio.
Observer (mamaly): modely natao hanomezana lanja kokoa ny lahatsoratra.
Discover: sary misy zoro fotsy malalaka, sary iray ambadika.
andry: tsanganana tokana, toy ny bilaogy.
alokaloka: miaraka amin'ny sisiny ankavia izay misy ny menio sy faritra lehibe eo ankavanana izay haseho ny atiny.
Alta: tsanganana telo ary miaraka amin'ny menio afovoany.
Fiz: sary misy fefy fotsy sy karazana bezel.
gloss: logo sy menio ao amin'ny faritra ambony.
Deluxe: toa mitsingevana eo amin'ny efijery antsika ny zava-drehetra.
Tone: tena miavaka, miaraka amin'ny sisiny ankavanana
Theme Minute: Modely tonga lafatra ho an'ny bilaogy literatiora
Mandeha amin'ny orana
nahiratra ny sainy,
Ahoana ny hevitrao momba ity fifantenana 60 ity Maimaimpoana tanteraka ireo lohahevitra Tumblr?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Famolavolana tranonkala » lohahevitra » Tema ho an'ny Tumblr
NESTicle dia hoy izy:
Okatheme no temotra tonga lafatra notadiaviko, misaotra betsaka Lúa :)
Valiny amin'ny NESTicle
Tsisy fisaorana! Faly aho fa nahasoa anao ilay lahatsoratra.
Fernanda gonzalez dia hoy izy:
Tsy azoko ny zavatra rehetra, apetrako ny anaran'ireo lohahevitra ary tsy hita izy ireo, ampio :(.
Valiny tamin'i Fernanda Gonzalez
Ny tokony adikao dia ny HTML ary apetaho amin'ny toerana ahitanao ny lohahevitra. Tsy haiko hoe aiza no hametrahanao ny anaran'ny lohahevitra fa heveriko fa very hevitra ianao. Manoro hevitra anao aho hijery tutorial, tsotra kokoa noho ny nieritreretanao azy io.
Loharano famolavolana sary 7 hanamboarana ny tetikasanao hamorona bebe kokoa